ခောတ်မှီလာ တဲ့ ဖက်ရှင် ပွဲ များ | Freedom News Group
ခောတ်မှီလာ တဲ့ ဖက်ရှင် ပွဲ များ
by FNG on July 11, 2012	နေမျိုးဦး ၊ ၊ရန်ကုန် မြို့၏ ဆူးလေဘုရား လမ်းရှိ ထရိတ်ဒါး ဟိုတယ် ၏ ခန်းမ တစ်ခု ထဲ
မီးရောင် စုံများဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံ နယူးယောက် မြို့မှ VIP ညကလပ် တစ်ခု အလား ထင်မှတ်
မှား ရသည်။ အနောက် တိုင်း ယဉ် ကျေးမှု နှင့် အတော် ပင် ကျင့် သား ရ နေ ပြီ ဖြစ်သည့် ပျိုပျို
အိုအို အမျိုး သမီး ကြီးငယ် များ က ဂျိမ်း(စ)ဘွန်း ရုပ်ရှင် ကားများ ထဲ က ၀ိုင် ၊ ရှန်ပိန် ၊ ဘီယာ ၊
အရက် လိုသလောက်ရ နိုင်သည်။
လင်း သွား လိုက် ၊ မှိန် သွား လိုက် မှီး ရောင် အောက် တွင် ရင် သား အလှ ၊ ကျောပြင် အလှ ၊ ပေါင်
တံ အလှ ၊ တင် အလှ စသည် တို့အသေးစိတ် ဦးစား ပေး ၀တ်ဆင် ထား သည် ရွှေပွဲ လာ တို့က
အလှ ပြ မော်ဒယ် (လ) များ ဖြင့် ပင် ပို ပြီး စွဲ ဆောင် မှု ရှိ နေသေး သည်။
(သတင်း ဆောင်းပါး အကြောင်း အရာ နှင့် ကျန်ရှိနေသည့် ဓာတ်ပုံ များ ကို မကြာခင် ဖော်ပြ ပါမည်)
ထရိတ်ဒါး ဟိုတယ် တွင် ကျင်းပသည့် အဆင့် မြင့် ဖက်ရှင်ရှိုး တစ်ခု
ထရိတ်ဒါး ဟိုတယ် တွင် ကျင်း ပသည့် Fashion Galleria Yangon မှ လှ ပျို ဖြုများ
ဖက်ရှင် ကျကျ လှပသူ များ
ဖက်ရှင် ရှိုး တစ်ခု မှာ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ
ဧရာဝတီ ဘဏ် နှင့် ကြေးရတတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ၏ ထောက်ကူ မှု ဖြင့် ကျင်းပသည့်ဖက်ရှင် ရှိုး
Fashion Galleria Yangon 2012
မြန်မာ ပြည်မှ ခမ်းနားသည့် လူဂုဏ်ထံ ဖက်ရှင် ရှိုး တစ်ခု
ဧရာဝတီ ဘဏ် အပါ အ၀င် ပွဲ ဖြစ် မြောက်ရေး အတွက် မတည် သူများ
From: ဖက်ရှင်, ဖျော်ဖြေရေး	← ဒိုက်ဦး ဆရာမ က ကျောင်းသား ကို အညှိုးကြီး စွာ ရိုက်နှက် ဆုံးမ
လော်စစ်ဟန် ၏ သားတစ်ဦး ကွယ်လွန် →
aung khine	#
ကောင်းပါတယ်….. ဒါပဲပြောချင်ပါတယ… အမှန်ကတော. သူတို.ကမဒိန်းမှူပပျောက်အောင်စွမ်းဆောင်နေကြတာပါ..မြင်ဖန်များလာတော. လူတွေက၇ိုးသွားပြီး ချွတ်ပြ၇င်တောင် မဒိန်းမှုမဖြစ်တော.ဘူးလေ…. ဂုဏ်ယူကြပါ …. ဒါမှမြန်မာ
September 5, 2012	justice man	#
ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရပြောင်းလဲလာတာမှန်ပေမယ့် မြန်မာဆိုတာကိုမမေ့အောင်တော့ ထိန်သိမ်းသင့်တာပေါ့။
အရာရာတိုင်းကို ပုံတူကူးလို့ တော့မဖြစ်ဘူး။
August 9, 2012	Htet San	#
မဆိုးဘူးနော် မြန်မာပြည် တော်တော်တိုးတက်လာပြီပဲ(မကောင်းတာတွေ)လူကြီးတွေတော့ အကြိုက်နေမှာပေါ့
July 18, 2012	Shyam	#
This article is misleading. It’sathing to welcome as people are working towards perfection and being professionals. Burma needsalot more developments in every perspect, not just in fashion field, but in all other fields as well; especially and urgently in education and healthcare.
July 11, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,524,462 hits
Thailand will hold elections by February 2; Yingluck may not be her party's choice to run, government spokesman says.6hours ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishLuxury river cruise to sail Myanmar waters next yearMyanmar refugees face land challenges on returnMyanmar gives relief to CebuMyanmar president visits northern CebuPH flounders in wushu; Myanmar leadsMyanmar's president asks Philippines for more aidUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearWant Burma info in your inbox each morning?